मैले त्यो श्रेय पाएको आभास पनि गरेको छु - अरुण तिवारी | ArtistSansar.com
अरुण तिवारी ,जनमानसमा परिचित गीतकार हुन् । केहि समय अगाडी उनको ‘ड्रिम्स कन्सेप्ट’ को रुपमा लिएको पुस्तक ‘सेलेक्टेड पोएम्स अरुण ‘ अहिले बजारमा उपलब्ध छ । हाल सम्म ३०० भन्दा गित रेकर्ड र हजारौं सिर्जना हरु लेखिसकेका छन् । हाल सम्म ६ एकल एल्बम प्रकाशन गरिसक्नुभएका अरुणलाई मन परेका र स्रोताले बहुरुचाइएका गीतहरुको गीतहरु संग्रहित‘सेलेक्टेड पोएम्स अरुण ‘ एक नेपाली र अर्को त्यहिँ गित लाई अंग्रेजीमा ट्रान्सलेशन गरिएको छ । ‘ड्रिम्स प्रोजेक्ट’ ‘सेलेक्टेड पोएम्स अरुण ‘ को सेरोफेरोमा आर्टिस्ट नेपाल का लागि मनोज के. सी ‘समय’ले गरेको कुराकानी, :-
# ‘ सेलेक्टेड पोएम्स अरुण’को बारेमा केहि बताईदिनुस न?
यो मेरो अहिले सम्मको स्रोताहरुबाट रुचाईएका, मेरो अन्तरमन ले रुचाईएका, मेरो हृदयले अभिब्यक्त गरेको गीतहरु मध्येबाट पनि सर्बश्रेस्ठ, अत्याधिक रुचाईएका गितहरुको संग्रह भएकाले ‘सेलेक्टेड पोएम्स अरुण’ नाम दिईएको हो । यसमा हरेक गीतलाई नेपाली र अंग्रेजी दुइ भाषामा ट्रान्सलेशन गरिएको छ । यो मेरो झन्डै झन्डै १० वर्ष अगाडी देखिको सोच थियो । नेपाली साहित्य कहिले पनि अन्तरास्ट्रिय करण भएन भन्ने गरिन्छ,। नेपाली साहित्यलाई अन्तरास्ट्रिय जगतमा पुर्याउन अंग्रेजीमा प्रकाशन गर्नु राम्रो माध्यम हो । र धेरै जनाको मासमा जानको लागि पनि दुवै भाषामा प्रकाशन गरिएको हो । र यो मेरो ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ हो ।
# तपाईको यो ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ प्रकाशन सम्मको सहयोगीहरुको बारेमा के भन्नु हुन्छ ?
यो पुस्तक प्रकाशनमा सहयोग पुर्याउनेहरु भन्दा पनि सबभन्दा पहिला असहयोगीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यबात दिन चाहन्छु । उनीहरु यो समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिमा पर्दछन । किनभने एकदमै बरिस्ठ भनिएका ३ जना प्राध्यापकहरु संग ट्रान्सलेशनको कुरा गरेको थिए । तर उनीहरुले संधै मलाई भईहाल्छ नि अरुण, म त तिम्रो गितको फ्यान, यति समय लाग्छ, जस्ता कुरा गर्दथे, तर गरेनन । उनीहरुको लागि भएपनि र उनीहरुले गर्दापनि यो पुस्तक प्रकाशन भएको हो ।
# यो पुस्तकमा तपाईंका कस्ता कस्ता गीतहरु देख्न पाउँछौ ?
यो पुस्तकमा जिबन जगत् , दर्शनलाई मैले कम्बाइन गरेको छु । र माया प्रेम घृणा र सम्पूर्ण उतारचडाव हरुलाई पनि समाबेश गरेको छु ।
# प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ ?
यो पुस्तक जो-जो पाठकहरुले पढ्नु भयो । पुस्तक पसल लगायतबाट पाएको प्रतिक्रियाबाट मलाई यति खुसि लागेको छ , ब्यक्त गर्न नै सकिन्न । बजार त्यति लिन सकेन, कारणहरु आफ्ना ठाउँमा छन् । यो आफ्नै पिडा हो । यहाँ राम्रा पुस्तकहरु हेरेर भन्दापनि बिज्ञापन बढि गरिएका पुस्तक बिक्ने प्रचलन छ । सिर्जना गर्दा म जति खुसि थिए। ति सृजनालाई यो पुस्तकको रुपमा प्रकाशन गर्दा भएको थिए । र अहिले त्यो भन्दा पनि धेरै पाठक प्रतिक्रिया बाट म सन्तुस्ट छु, खुसि छु । # एउटा लेखक लाई सृजना गरिसकेपछि प्रकाशन गर्नेबेला सम्मको छटपट्टि कस्तो हुन्छ?
सृजना गर्नु पनि एकप्रकारको छटपट्टि नै हो । जब एउटी आमा आफ्नो गर्बाबस्थाको अबस्थामा पुग्दा जुन प्रकारको छटपट्टिमा हुन्छिन्,त्यस्तै सर्जकलाई पनि सृजना पुर्ण नहुन्हेल् सम्म हुन्छ । जब सृजना सकिसकेपछि जुन प्रकारको सन्टुस्टि प्राप्त हुन्छ, अनि आमाले आफ्नो गर्बाधारण भैसकेपछि, सन्तान प्रति देखाउने मोह , र सन्तुस्टी जतिको हुन्छ ।
# यो पुस्तक तपाईं ले आफैले प्रकाशन गर्नु भयो , प्रकाशक बाट र आफैं ले प्रकाशन गर्दा को फरक के रहेछ त ?
यो पुस्तकलाई मेरो जुन प्रकारको क्यालिटी को सोच थियो। जुन प्रकारको प्रकाशन को सोच थियो । त्यहिँ अनुसार गरेको हो । मलाई एउटा प्रकाशन गृहले २० हजार एडभान्स पनि दिएको थियो । तर अहिले यो जुन क्यालिटी, जुन स्टान्डर्ड मा प्रकाशन भएको छ । र मैले त्यहि क्वालिटीमा प्रकाशनको कुरागर्दा उहाहरुले प्रकाशन गर्न नसक्ने हुनुभएको थियो । र फरक पनि यहि हो – उहा हरु बजार मात्र हेर्नु हुन्छ । क्वालिटी हेर्नु हुन्न ।
# कति पेज मोटो छ पुस्तक ?
५७ ओटा लोकप्रिय मानिएका गीतहरु र १३० पृष्टको मुल्य रु. ४०० राखिएको छ ।
# पाठकले के ४०० तिरे बराबरको सन्तुस्ट पाउने कुरामा बिस्वस्थ हुनुहुन्छ ?
यसमा म्याट्रीयल हैन पुस्तकको प्याकेजिंग , त्यसमा प्रयोग गरिएको हार्ड कभर , त्यसलाई मर्ज गरेको बाहिरी खोल , भित्र प्रयोज भएको पेपर ,सबैको दाजोमा ४०० तिर्ने पाठक अभागी चाही पक्कै हुँदैन । # यसको कभर एकदमै मिठो बनेको छ, यसको डिजाइनर कसले गर्नु भएको हो ?
शिव भक्त श्रेष्ठ। एकदमै राम्रो आर्टिस्ट हुनुहुन्छ । उहालेनै गर्नु भएको हो यसको डिजाइन ।
# एउटा गीतकारलाई पुस्तक र एल्बममा तपाईं कस्तो अन्तर पाउनु हुन्छ ?
गित बाट अत्याधिक मासमा चाडै पुग्न सकिन्छ । किताबबाट त्यो प्राप्ति चाही नहुँदो रहेछ। तर मनका अभिव्यक्ति जति पुस्तकमा देखाउन सकिन्छ । त्यहिँ गितमा नआउन पनि सक्छ । गित सफल हुनमा कम्पोजरको पनि हात हुन्छ । गायकले राम्रो संग गाएन भने त्यो गित माथि घोर अत्याचार नै हुन्छ ।तर सर्जकको लोभ र मोह कस्तो हुँदोरहेछ भने, सम्पूर्ण श्रेय आफुँले प्राप्त गरूँ । त्यो श्रेय प्राप्तिको मोहबाट म पनि मुक्त थिइन् । र किताब बाट मैले त्यो श्रेय पाएको आभास पनि गरेको छु।
# तपाईं फेसबुक मा पनि हुनुहुन्छ , त फेसबुक मार्फत प्रचार गर्ने प्रचलन पनि ज्यादा छ ? तपाईले चाही कति गर्नु भएको छ ?
फेसबुकलाई मैले प्रचारको माध्यम बनाएको छैन । कसैलाई किन्दे भनेर एक शब्द पनि भनेको छैन । सायद म अन्तर्मुखी भएको ले पनि हुन सक्छ ।
# अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
मेरो ‘ड्रिम्स प्रोजेक्ट’ ‘सेलेक्टेड पोएम्स अरुण ‘ अहिले बजार मा आएको छ । यो पुस्तक पढ्नु भएका मेरा सम्पूर्ण पाठकहरुलाई कृपया प्रतिक्रिया गरिदिन अनुरोध गर्दछु । सम्पर्क को लागि ,tiwari_arun@hotmail.com मा मेल गर्न सक्नु हुनुहुनेछ । र आर्टिस्ट नेपालको यो पृथक प्रयाशको सफलताको कामना गर्दछु ।
# यसमा ट्रान्सलेशन गरिएको सृजनाहरुमा सबैभन्दा मन परेको ट्रान्सलेशन कुन लग्यो ?
मैले उनलाई प्रस्ताब राखें बिस्तारै-बिस्तारै (I proposed her slowly-slowly)
उनले पनि हुन्छ भनिन् बिस्तारै-बिस्तारै (she also accepted slowly-slowly)
आँखा-आँखाको कुरा भा’हो पहिले (Eyes-eyes talked together frist)
बोलि पनि हराउथ्यौ मेरो त कहिले (sometimes speechless I used to be)
जति खुम्चिए’नि हुने कुरा भैंहाल्यो (As I tried myself to suppress, things happened)
सार्है नजिक भइन् उनी बिस्तारै-बिस्तारै (She become near to me slowly-slowly)